တိုက်ဆိုင်မှုရှိတဲ့ရင်တွင်းခံစားချက်တချို့ကို မျှဝေလာ တာ ကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေ စိတ်ပူနေကြတဲ့ ဖွေးစိန်ရဲ့ အချစ်ရေး – XB Media & News
တိုက်ဆိုင်မှုရှိတဲ့ရင်တွင်းခံစားချက်တချို့ကို မျှဝေလာ တာ ကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေ စိတ်ပူနေကြတဲ့ ဖွေးစိန်ရဲ့ အချစ်ရေး
December 13, 2021 Bestie_Author Cele News 0
တိုက်ဆိုင်မှုရှိတဲ့ရင်တွင်းခံစားချက်တချို့ကို မျှဝေလာတာကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေ စိတ်ပူနေကြတဲ့ ဖွေးစိန်ရဲ့ အချစ်ရေး..
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…အနုပညာလောကမှာ ရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကောင်းပေါင်းများစွာကို ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းမှာ ပီပြင်ပိုင်နိုင်စွာသရုပ်ဆောင် နိုင် တဲ့အတွက် အကယ်ဒမီထူးချွန်ဆုကြီးကို ထိုက်ထိုက်ရရှိခဲ့တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အချစ်တော်မင်းသမီးချောလေးဖွေးဖွေးဟာဆိုရင် အောင် မြင်မှုတွေနဲ့ အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ ‌အောင်မြင်လာခဲ့တာ ယနေ့ထိတိုင်ပါပဲနော်အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေ မှာဆိုရင်လည်း ဖွေးဖွေးကပြည်သူလူထုနဲ့တစ်သားတည်းရပ်တည်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်.။
အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်လဲ သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေးက ” “ As For me ရည်ရှည် သွားချင်တယ်ဆိုရင် ရိုးသားစစ်မှန်ခြင်း လိုတယ်”🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍✨✨✨✨✨ကိုယ့်အပေါ် Loyal မဖြစ်ရင် သူငယ်ချင်းဖြစ်ဖြစ် ရည်းစားဖြစ်ဖြစ် နောက်ဆုံးကုန်ကုန်ပြောရရင်မိသားစုဆွေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာကြီးပြဲ ဖစ်နေနေ
ဘယ်လိုမှLife Journey မှာ အဖော်အဖြစ်ခေါ်သွားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး…ကိုယ့်အတွက်တကယ်အရေးပါသူ ချစ်ရသူ ဘေးမှာရှိစေချင်သူတွေ အပေါ် ရိုးသားစစ်မှန် ပြရင်း တန်ဖိုးထားနိုင်ကြပါစေ… #ဖွေးဖွေး” 🎄🍀🌿🕊🕊ဆိုပြီးရေးသားလာခဲ့ပါတယ်.
သူမ ရေးသားလာခဲ့တဲ့ ပို့စ်အောက်မှာတော့ ပရိသတ်တွေက ချစ်သူများရှိနေပြီလားဆိုပြီး ကောမန့်တွေနဲ့ မေး ထားခဲ့ကြပါတယ်။ သူမ ရေးလာတဲ့ စာသားကလဲ ချစ်သူအတွက်ကို ရည်ရွယ်တယ်လို့လည်းထင်ယောင်ထင်မှားလေးလည်း ဖြစ်စေတာကြောင့် . ပရိသတ်ကြီးလည်း ဖွေးဖွေးက ဘယ်သူ့ကို ရည်ရွယ်တယ်ဆိုတာလည်း ခန့်မှန်းပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်…
crd Cele World
တိုက္ဆိုင္မႈရွိတဲ့ရင္တြင္းခံစားခ်က္တခ်ိဳ႕ကို မွ်ေဝလာတာေၾကာင့္ ပရိတ္သတ္ေတြ စိတ္ပူေနၾကတဲ့ ေဖြးစိန္ရဲ႕ အခ်စ္ေရး..
ပရိတ္သတ္ႀကီးေရ…အႏုပညာေလာကမွာ ႐ုပ္ရွင္နဲ႔ဗီဒီယိုဇာတ္ေကာင္းေပါင္းမ်ားစြာကို က်ရာဇာတ္႐ုပ္တိုင္းမွာ ပီျပင္ပို င္ႏိုင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ တဲ့အတြက္ အကယ္ဒမီထူးခြၽန္ဆုႀကီးကို ထိုက္ထိုက္ရရွိခဲ့တဲ့ ပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕အခ်စ္ေတာ္မင္းသ မီးေခ်ာေလးေဖြးေဖြးဟာဆိုရင္ ေအာင္ ျမင္မႈေတြနဲ႔ အႏုပညာလမ္းေၾကာင္းမွာ ‌ေအာင္ျမင္လာခဲ့တာ ယေ န႔ထိတိုင္ပါပဲေနာ္အခုလက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနေတြ မွာဆိုရင္လည္း ေဖြးေဖြးကျပည္သူလူထုနဲ႔တစ္သားတ ည္းရပ္တည္ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္.။
အခုတစ္ခါမွာဆိုရင္လဲ သ႐ုပ္ေဆာင္ေဖြးေဖြးက ” “ As For me ရည္ရွည္ သြားခ်င္တယ္ဆိုရင္ ႐ိုးသားစစ္မွန္ျခင္း လိုတယ္”🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍✨✨✨✨✨ကိုယ့္အေပၚ Loyal မျဖစ္ရင္ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ျဖစ္ ရည္းစားျဖစ္ျဖစ္ ေနာက္ဆုံးကုန္ကုန္ေျပာရရင္မိ သားစုေဆြမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘာႀကီးၿပဲ ဖစ္ေနေန
ဘယ္လိုမွLife Journey မွာ အေဖာ္အျဖစ္ေခၚသြားဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ဘူး…ကိုယ့္အတြက္တကယ္အေရးပါသူ ခ်စ္ရသူ ေဘးမွာရွိေစခ်င္သူေတြ အေပၚ ႐ိုးသားစစ္မွန္ ျပရင္း တန္ဖိုးထားႏိုင္ၾကပါေစ… #ေဖြးေဖြး” 🎄🍀🌿🕊🕊ဆိုၿပီးေရးသားလာခဲ့ပါတယ္.
သူမ ေရးသားလာခဲ့တဲ့ ပို႔စ္ေအာက္မွာေတာ့ ပရိသတ္ေတြက ခ်စ္သူမ်ားရွိေနၿပီလားဆိုၿပီး ေကာမန႔္ေတြနဲ႔ ေမး ထားခဲ့ၾကပါတယ္။ သူမ ေရးလာတဲ့ စာသားကလဲ ခ်စ္သူအတြက္ကို ရည္႐ြယ္တယ္လို႔လည္းထင္ေယာင္ထင္မွားေလးလည္း ျဖစ္ေစတာေၾကာင့္ . ပရိသတ္ႀကီးလည္း ေဖြးေဖြးက ဘယ္သူ႔ကို ရည္႐ြယ္တယ္ဆိုတာလည္း ခန႔္မွန္းေပးခဲ့ၾကပါအုံးေနာ္…
ဒီကနေ့ဟာ ပရိတ်သတ်အရမ်းချစ်ရတဲ့ မင်းသမီးချော မေပန်းချီ ရဲ့ မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်
မိခင်ကြီးကို အရမ်းလွမ်းဆွတ်တမ်းတနေကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ ရင်ဖွင့်လာခဲ့တဲ့ သွန်းသစ္စာဇော်